Uthishanhloko kwelokudlwengula | IOL Isolezwe
Isolezwe / 8 November 2012, 11:35am / NOKUBONGWA PHENYANE
Uhishanhloko wase Njabulu Senior Primary u Mnuz Desmond Peter Makhanya (44) engena enkantolo yase Scottburg ngecala lokunukubezwa abafundi.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
USWELE umgodi wokucasha uthishanhloko wesikole iNjabulo Senior Secondary eMkhomazi ngesikhathi engena ebhokisini lofakazi eNkantolo yesiFunda eScottburgh ngamacala okudlwengula abafundi besikole sakhe ezigamekweni ezihlukene. Lo thisha oneminyaka engu 44 ubhekene namacala ayisikhombisa okukhona kuwo amane okudlwengula, awokuhlukumeza ngokocansi kanye nelokuveza ubuntu phambi kwezingane.
Ungene enkantolo ephuphutheka kubonakala ukuthi udidekile, okungaphelanga nesikhathi esingakanani umphakathi obugcwele inkantolo iningi obekungabesifazane wamchapha ngayo yonke inhlamba ebithinta nezitho zakhe zangasese.
IMantshi uMnuz Christian Schoeman, ayizange imbuze ukuthi uyalivuma noma uyaliphika yini icala.
Ube esebuzwa ukuthi uzozikhulumela yini noma uzodinga ummeli wathi uzoba nommeli wakhe kodwa usadinga isikhathi sokuthi amazise.
IMantshi ibe isilihlehlisela uMsombuluko icala.
Lo thishanhloko ubefake ihembe elimithende elibukekayo nebhulukwe elimnyama.
Isolezwe libike okokuqala ngokuboshwa kwalo thisha ngoLwesibili emuva kokuba elandwe ngamaphoyisa esikoleni phambi kwabafundi nothisha. Enkantolo indodana yalo thishanhloko ibonakale ikhihla isililo ngesikhathi amaphoyisa esemqhuba embuyisela ezikiti. Ngaphambi kokushona emgodini uke waxhumana nomunye womndeni wakhe ecela imali bamnika u-R100.
Amalungu omphakathi athe awadingi ukuthi umsolwa aze aphume ejele ngebheyili njengoba lo mkhuba wokudlwengula izingane kade awuqala.
Ikhansela laseMahlongwa ewadini lapho kufundisa khona lo thisha uMnuz Ntokozo Maphumulo uthe umsowa waxoshwa ezikoleni ezimbili ayesebenza kuzo esolwa ngawo umkhuba wokudlwengula izingane.
“Asisamdingi esikoleni sethu wahamba eDududu naseMzinto exoshelwa wona lo mkhuba.
“Besicabanga ukuthi izingane zivikelekile lapha kodwa yena uzibizela ehhovisi lakhe azidlwengule,” kusho uMaphumulo.
Uyise omncane kamsolwa uthe indodana yakhe ayazi lutho ngala macala ebhekene nawo.
“Kukhona othisha abayizondayo indodana yami lapha okuyibo abayibophele uzungu lokuthi idlwengula izingane.
“Ungumuntu owanyanya kabi amanyala lo, ubengeke nakancane aze akwenze lokhu ezinganeni,” kusho lesi sihlobo.
Uthe izingane ubejwayele ukusebenzisana nazo njengoba ubengumuntu ozifundisa umculo ukuze zinqandeke emikhubeni emibi.